बढ्यो विदेशी मुद्राको भाउ : हेर्नुहोस् कुन देशको कति ? – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/बढ्यो विदेशी मुद्राको भाउ : हेर्नुहोस् कुन देशको कति ?
काठमाडौँ / मंगलबार युके पाउण्ड र कतारी रियालसहित केही देशको विनिमयदर बढेको छ । भने अमेरिकी डलरको भाउ घटेको छ । आज नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमयदर अनुसार एक अमेरिकी डलरको खरिददर १ सय २१ रुपैयाँ ३४ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १ सय २१ रुपैयाँ ९४ पैसा तोकिएको छ । त्यस्तै एक बहराईन दिनारको खरिददर ३ सय २१ रुपैयाँ ७३ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३ सय २३ रुपैयाँ ३२ पैसा तोकिएको छ ।
एक कतारी रियालको खरिददर ३३ रुपैयाँ ३३ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३३ रुपैयाँ ४९ तोकिएको छ । त्यस्तै कोरियन वन एक सयको खरिददर ९ रुपैयाँ ९९ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रीदर १० रुपैयाँ ४ पैसा तोकिएको छ ।
त्यस्तै आज एक यूरोपियन यूरोको खरिददर १ सय ३६ रुपैयाँ ८ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर १ सय ३६ रुपैयाँ ७५ पैसा रहेको छ। एक युके पाउण्ड स्ट्रलिङको खरिददर १ सय ५० रुपैयाँ ४६ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १ सय ५१ रुपैयाँ २१ पैसा तोकिएको छ।
त्यस्तै एक कुवेती दिनारको खरिददर ३ सय ९४ रुपैयाँ ९ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३ सय ९६ रुपैयाँ ४ पैसा तोकिएको छ । एक साउदी रियालको खरिददर ३२ रुपैयाँ ३५ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ ५१ पैसा तोकिएको छ । एक मलेसियन रिँगिटको खरिददर २८ रुपैयाँ ३४ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर २८ रुपैयाँ ४८ पैसा तोकिएको छ ।
ललितपुरमा घट्यो निकै दर्दनाक घट्ना
जोडिले होटलमा कोठा लिई लामो समय बाहिर नआएपछि हेर्न पुग्दा सबै चकित
बारामा विवाह गर्न गएका बेहुला र बेहुला बुवा जे गरे ….